HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul2 oo loogu talagalay buundooyinka iyo jidka weyn. qoraal
08 / 01 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, hyperlinks, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
General Directorate of Waddooyinka, jid iyo buundada cunaha toll ee 1 January kiciyey oo ku saabsan diyaargarowga sameeyey saamaynta ka 2018 '% kordhay 25' ma aha dhabta ah ee ku saleysan sheegashada, gobolka iyo fasalka xisaabinta loo sameeyey markuu kor u codsatay in boqolkiiba kiro on heerka 10 celcelis ahaan u dhiganta in Waxa uu sharaxay.
War saxaafadeed ay soo saartay Agaasimaha Guud ee Wadooyinka:
kiro Highway iyo Bridge Bosphoru in 1 January ee 2018 waxaa habeyn si ay u noqon wax ku ool ah laga bilaabo Isniinta publications warbaahinta qaar ka mid ah wararka ku xiran-ku taala iyo dib u eegista. si sax ah wacyigalinta dadweynaha ee saaraysa waxaa lagu ogaaday in ay u baahan yihiin.
Sicirka sicirka ma aha heerka 25 ee baabuurta oo idil. Sida la ogyahay, khidmadaha wadooyinka iyo buundooyinka ayaa lagu qiimeeyaa iyadoo la eegayo dhererka wadada loo isticmaalo fasalka gaadhiga 6. Sicirka qiimaha ee ugu dambeeyay, qiimaha biilasha ayaa lagu go'aamiyaa iyadoo la raacayo fasallada gaadhiga iyo meelaha jidka weyn. Xaaladdan oo kale, waddankeena waxaa loo qaybiyaa aagagga 5 (Bosphorus Bridges iyo Trakya, Anadolu, Ege iyo Wadooyinka Wadooyinka). Qaar ka mid ah waddooyinka wadooyinka, qiimaha gaadiidka ee 1 ayaa kor u kacay by% 25, halka gobollada qaarkoodna ay ahaayeen% 10. Gobolada qaarkood 3., 4., 5. 10. Miisaaniyada fasalka, lacagta 6 ayaa sii socota in la hirgeliyo iyadoon la kordhin dalka. Natiijada, marka xisaabinta la sameeyo oo ku salaysan gobolka iyo fasalka, kororka lagu dabaqayo tigidhada waxay ku xiran tahay heerka celceliska% 2017.
Si kastaba ha ahaatee, in publications qaar ka mid ah; kiro buundada ee ku xiran height of dhismeedka in la kordhiyo buundada of kharashka daryeelka iyo dayactirka dhab samayn karo sanadaha cusub 15 buundada la xiriirta customka laga soo ururiyey buundooyinka iyo kharashyada dayactirka ee dadweynaha sida in sare sida ku qeexan news habaabin arkay. Last sano July 15 15, kaliya sidii loo xoojin lahaa inuusan Korkoda iyo Fatih Sultan Mehmet Bridge ka dhanka ah dhulgariir sameeyey iyada oo ujeedadu of fidinayo nolosha adeega inay u adeegaan oo sannado badan iyo dayactirka kale ee waaweyn mashaariic 842 million TL ayaa qaatay. Kuwaas waxaa ka mid caadi ah dayactirka, shaqaalaha, iwm kuma jiraan kharashka iftiiminta.
Tolls of Bosphorus Bridges